ब्यापारिक « Dainik Patra-मोफसलको सर्वाधिक बिक्री हुने दैनिक पत्रिका
बुटवल, ८ जेठ (दैपस)– विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूको मागप्रति चासो नदिएको भन्दै आन्दोलनरत उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा तालबन्दी गर्ने भएका छन् । अनियमित लोडसेडिङ्ग, ट्रिपिङ्ग र लो भोल्टेज समस्या समाधानका लागि भन्दै रूपन्देही उद्योग संघले चार दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै चासो नदेखाएका कारण बिहीबारदेखि रूपन्देही उद्योग संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण शाखा बुटवलमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने भएको हो । विद्युत् समस्याले उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको, करोडौंको मेसिनरीहरू बिग्रँदै गएको तथा आम उपभोक्ताको जनजीवनमा समेत कठिनाई सिर्जना भएको भन्दै रूपन्देही उद्योग संघले यसअघि वैशाख ३१ गते विद्युत् प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
संघले जेठ ५ देखि ७ गतेसम्म विद्युत् प्राधिकरणमा धर्नासमेत दिएको थियो । मंगलबार उद्योगी र प्राधिरकणबीच छलफल भई यस क्षेत्रको समस्या बुधबारभित्र समाधानका लागि माथिल्लो निकायमा पहल गर्ने सम्झौता भए तापनि बुधबार पनि विद्युत् प्राधिकरणबाट समस्या समाधानका लागि कुनै लिखित जानकारी पत्र नआएकोले तालाबन्दी गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको संघका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले जानकारी गराउनुभएको छ ।
संघले बुधबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीलाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाउनुका साथै तालाबन्दी सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकको नेतृत्वमा गएको डेलिगेसन टोलीले यस क्षेत्रको विद्युत् समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग मागसमेत गरेको छ । टोलीमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष एजाज आलम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोनिन पिया, उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी, महासचिव गणेशप्रसाद अधिकारी, कोषाध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठ, सचिव बाबुराम बोहरा, का.स.सदस्य माधवप्रसाद पौडेल, शिवकुमार पाठक, रुद्रबहादुर हमाल, कृष्ण पौडेल, नारायण भण्डारी, लोकबहादुर खत्री तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवप्रसाद भण्डारीको सहभागिता रहेको थियो ।
दाङ जिल्ला भरका सुन पसलहरू बन्द भएको तीन दिन भैसकेको छ । सुनको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै उपभोक्ताहरूले सुन किन्न नपाइरहेको अवस्थामा जिल्लाका सुन व्यावसायीहरूले सुनको सहज आपूर्तिको माग गर्दै तीन दिनदेखि जिल्लाभरका सुनचाँदी पसल ठप्प पारेका छन् । सुनको सुलभ आपूर्तिको माग गर्दै जिल्लाभरका १ सय बढी सुनचाँदी पसलहरू तीन दिनदेखि बन्द छन् ।
सुनको भाउमा गिरावट आए तापनि व्यापारीहरूलाई आवश्यक पर्ने सुन पर्याप्त मात्रामा निर्धारित मूल्यमा उपलब्ध गराउनसमेत नसकिने अवस्था सृजना भएको भन्दै सुनको सहज आपूर्तिको माग सरकारसँग गरिएको संघका जिल्ला अध्यक्ष दिलबहादुर बराईलीले बताउनुभयो । ‘सुनको सहज आपूर्तिका लागि हाम्रो आन्दोलन हो’, उहाँले भन्नुभयोे– ‘जहिलेसम्म सरकार प्रतिबद्ध हुन्न त्यहिलेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
सुनचाँदीको सहज आपूर्ति र शान्ति सुरक्षाको माग राख्दै सुनचाँदी व्यवसायी संघ दाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण पनि गराउने तुलसीपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव हरिकृष्ण विकले जानकारी दिनुभयो । ‘शान्ति सुरक्षाको विषय पनि हाम्रो मुद्दा हो’, विकले भन्नुभयो– ‘दिन दाहडै सुन पसलमा चोरी हुन्छ ।’ सुनको भाउमा ओरालो लागेपछि व्यवसायीहरूले सुन लुकाएर आन्दोलनको बाहना गरेको ग्राहकहरूको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि सुनचाँदी पसलहरू बन्द हुँदा सुन किन्नेहरू मर्कामा परेका छन् । यसैबीच, सुनको भाउ बुधबार तोलामा १ सय ४५ रूपैयाँ घटेर कारोबार भएको छ । छापावाला सुनको मूल्य तोलाको ५० हजार १ सय ५५ रूपैयाँ कायम भएको छ । निरन्तर ओरालो लागेको चाँदीको मूल्य बुधबार भने घटेको छैन । चाँदी तोलाको ८ सय ६४ रूपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
काठमाडौं,७ जेठ – मनी चेन्जर कम्पनीहरूले जथाभावी कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरीवेÔणलाई तीब्रता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्Èमा ३ सय वटा कम्पनीको सुपरीवेÔण गरिसकिएको र गैरकानुनी कारोबार गर्ने ४ कम्पनीलाई खारेज गरिएको वैदेशिक विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक लीलाप्रकाश सिटौलाले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न कम्पनीलाई सचेत पार्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र कारोबार सच्चाउन निर्देशन गर्ने लगायतका कारबाही गरिएको छ । कम्पनीहरूले अनुमति नलिएका कारोबार गरेका, लेखा सही ढंगले नराखेका, विदेशी मुद्रा औपचारिक कारोबारमा कम देखाउनेलगायतका कैफियत भेटिएका छन् ।
करिब ५०० मनी चेन्जर कम्पनी काठमाडौं उपत्यका र करिब त्यत्ति नै संख्या उपत्यकाबाहिर गरी एक हजार कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारोबार अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका छन् । मनी चेन्जर कम्पनीहरूको सघन रूपमा सुपरीवेक्षण भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
विद्यमान कम्पनीहरूको यथार्थ अवस्था बुझ्न अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले मनी चेन्जरको लागि नयाँ लाइसेन्स बन्द गरेको छ । धेरै संख्या पुगेको हुनाले अनुगमन प्रभावकारी नभएको हुनाले तत्काललाई नयाँ लाइसेन्स बन्द गरिएको कार्यकारी निर्देशक सिटौलाले बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकले भारतीय रूपैयाँ मात्र, अन्य विदेशी मुद्रासहित र राहदानीको समेत गरी विभिन्न स्तरको कारोबार गर्न लाइसेन्स दिने गरेको छ । सानो कारोबारको लाइसेन्स लिएका कम्पनीले अन्य कारोबारसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सघन सुपरीवेक्षणपछि विभिन्न विकृति उजागर भएको र अब राष्ट्र बैंकको ध्यान मनी चेन्जर कम्पनीतर्फ पनि केन्द्रीत भएको हुनाले यस क्षेत्रका विकृत्ति न्यूनीकरण हुने कार्यकारी निर्देशक सिटौलाले बताउनुभयो ।
यसैगरी, मनी ट्रान्सफर कम्पनीको लागि पनि लाइसेन्समा कडाइ गरिएको छ । हालसम्म रेमिटान्स भित्राउन प्रतिस्पर्धा नभएका मुलुकबाट रेमिटान्स भित्राउन लाइसेन्स दिने तर पुरानै ठाउँमा भिड बढाउन लाइसेन्स नदिने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रेमिटान्स बैंकिङग च्यानलमार्फत ल्याउन राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको कार्यकारी निर्देशक सिटौलाले बताउनुभयो ।
विराटनगर, ५ बैशाख । अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले आगामी वर्षको बजेट नतिजामुखी र फरक विशेषतासहितको आउने बताउनुभएको छ ।
बिराटनगरमा आयोजित पूर्वाञ्चलस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले आगामी बजेट विगतको भन्दा नतिजामुखी हुने बताउनुभयो । एक्काइसौं शताब्दीको विकासको संवाहक निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई ‘माइनस’ गरेर अगाडि बढ्न नसकिने बताउँदै अबको बजेट निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरि आउने जानकारी दिनुभयो । नियमित बजेट नआउँदा निराश भएका व्यवसायीहरूका लागि यो बजेट महत्वपूर्ण हुने कोइरालाले बताउनुभयो ।
सरकारले आथिर्क बृद्धिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहित बजेट ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकार राजश्व संकलनमा आक्रमक हुने बताउँदै कोइरालाले राजश्व संकलनमा कसैले कमजोरी गरेमा त्यसलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । बजेटले विकास निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कोइरालाको भनाई थियो ।
सरकारलाई बैंकरको सुझाव
काठमाडौं, ५ जेठ(दैपस)– बैंकरहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आयमा लाग्ने कर ३३ प्रतिशतले घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । देशको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याइरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई चुरोट, बिँडी र मदिराजन्य उत्पादनसरह कर लगाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै बैंकरहरूले आय कर घटाउन माग गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिँदै संस्थाको आयकरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेका हुन् । अहिले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नाफामा ३० प्रतिशत लगाइरहेको छ । चुरोट तथा मदिरा उत्पादनमा पनि सरकारले ३० प्रतिशत कर उठाइरहेको छ । ”देशका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लघुस्तरका कारोबार गर्ने व्यक्तिदेखि ठूला संगठित संस्थालाई सेवा उपलब्ध गराएर समग्र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याएका छन्,” संघको सुझावमा छ । लोडसेडिङ कहिले हट्छ
काठमाडौं, ५ बैशाख । लोडसेडिङको अवधि घटबढ भैरहेपनि पुरै हट्ने संकेत चाहिँ अझै देखिएको छैन । खोलानाला सुक्ने समय हिउँदमा मात्रै होइन, बाढी र भल बग्ने वर्Èायाममा समेत लोडसेडिङ भैरहेको छ । हरेक सरकारले लोडसेडिङ हटाउने योजना र गफ थुप्रै ल्याएपनि अवस्था चाहिँ जिउँका त्यूँ नै छ ।
पाँच वर्È, १० वर्È, २० वर्Èसम्म लोडसेडिङ हटाउने भन्ने सबैका आआफ्नै लक्ष्य छन् । तर लोडसेडिङ कहिलेसम्म अन्त्य भैसक्छ भन्ने विÈयमा न प्राधिकरणलाई थाहा छ, न सरकारलाई । भविष्य बताउने ज्योतिÈले समेत यसै भन्न नसक्ने अवस्था छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अबको पाँच वर्Èभित्र ८ सय ८९ मेगावाट बिजुली थपिनेछ । तीमध्ये ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको काम छिटो सकिने प्राधिकरणको अपे क्षा छ ।
प्राधिकरणले १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ४२ मेगावाटको साञ्जेन, १४ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र ३० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी बन्ने तयारीमा छ । अबको पाँच वर्षभित्र नबनेपनि ७ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना पनि बन्ने तयारीमा छ ।
निजी र विद्युत् प्राधिकरणको जोड्दा अहिले ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यदि बनिरहेका आयोजनाहरू भनेको समयमा पूरा भएमा आउँदो ५ वर्Èमा २ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विद्युत उत्पादन बढेपनि लोडसेडिङ हट्ने सम्भावना चाहिँ छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार १३ प्रतिशतको दरले विद्युतका ग्राहक बढिरहेका छन् । यहि तथ्यांकलाई आधार मानेर विद्युत् प्राधिकरणले आउँदो ५ वर्षको हिउँदमा दैनिक ९–१० घण्टाको हाराहारीमा लोडसेडिङ हुने प्रक्षपण गरेको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित
स्याङ्जाका व्यवसायी र ग्राहक मर्कामा
स्याङ्जा, ४ जेठ । सरकारले सुनको सहज आपूर्ति गर्न नसकेको आरोप लगाउदै स्याङ्जाका सुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बजारमा सुनको माग अत्याधिक बढेका बेला सहज रूपले सुन पाउन नसक्दा व्यवसायीहरू व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
व्यवसायीहरू महङ्गोमा सुन खरिद गरेर नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले निर्धारण गरेको मूल्यमा कारोबार गर्न नसकिने भन्दै विगत चार दिनदेखि अनिश्चितकालका लागि आफ्ना पसल बन्द गरेका छन् । सुनको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै बजारमा ग्राहकको निकै भिडभाड भइरहेका बेला सरकारले सुनको आपूर्ति सहज नगरेकाले व्यापारमै समस्या आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
स्याङ्जालाई हप्तामा ३ किलो सुन आवश्यक रहेको तर तिन हप्तामा १ किलो मात्र सुन पाइने हँुदा ब्यापार ब्यवसाय चलाउनै कठिन भएको सुनचाँदी व्यवसायी संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर वि.क.ले बताउनुभयो । सुनको कारोवार बैंकवाट गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । बैंकले सहज रूपमा सुन नदिएको अवस्थामा अन्य डिलरबाट सुन खरिद गर्दा तिन हजारदेखि चार हजारसम्म महङ्गो पर्ने भएकाले आफूहरूलाई समस्या पर्दै आइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
स्याङ्जामा करिब १ सय ५० सुनचाँदी व्यवसायी रहेका छन् उनीहरू अहिले आफ्नो पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले सुनको सहज व्यवस्था नगर्दा सम्म पसल नखुल्ने व्यवसायीले बताएका छन् । ग्राहकलाई रित्तै पठाउनुभन्दा पसलै बन्द गरेर बस्नु बेस भन्दै आफूहरूले पसल बन्द गरेको सुनचाँदी व्यवसायी समिती स्याङ्जाले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी जनाएको छ । विज्ञप्तीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन वितरण प्रणालीमा मनपरी गरेको भन्दै त्यस पक्षलाई तुरुन्त सच्याउनु पर्ने पनि माग गरिएको छ ।
महिला कृषि सहकारीद्वारा सामूहिक बेसार खेती
पाल्पा (रामपुर), ४ जेठ ।
रामपुर २ की गीता भट्टराईले पहिलो पटक सामुहिक बसेर बेसार लगाउनुभएको छ । गाउँमा हलेदो भनेर पनि चिनिने बेसार खेती एक्लै व्यवसायिक रूपमा गर्न जागर आएन तर त्यही बेसार सामूहिकरूपमा रोपेर आम्दानी लिन उहाँ निकै हौसिनुभएको छ । सामुहिक बेसार खेतीबाट गाउँका कृषक आत्मनिर्भर बन्ने सोचमा छन् सहकारी संस्थाकी सचिव मेत रहनुभएकी भट्टाईले भन्नुभयो ।
चुलोचौकोमा सिमित महिलाहरू पछिल्लो समय एकजुट भई समुहमा बसेर सामुहिक कार्यमा उल्लेख्य रूपमा लागिरहेका छन् । आयआर्जन र सिपमुलक कार्यमा लागेका महिलाहरू क्षमतामा बिकासका साथै राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन् ।
पुर्वी पाल्पा रामपुरका माथिल्लो भेगका महिलादिदीबहिनीहरू एकजुट भएर कृषि सहकारी स्थापना गरी ब्यवसायिक रूपमा आम्दानीको बाटोमा लागेका छन् । ‘‘महिला घरमै मात्र सिमित रहनुपर्छ’’ भन्ने पुरानो मान्यतालाई तोड्दै ‘‘आयआर्जन गर्नुपर्छ’’ भन्ने मान्यताले २०६२ सालमा स्थापना भएको कृषि समुह अहिले सहकारीमा परिणत भई पुर्वी पाल्पामा नै पहिलो पटक सामुहिक बेसार खेती गरेको छ ।
समुह गठनपछि ब्यवसायिक रूपमा बाख्रा पालन, तरकारी खेती गर्दै आएका महिलादिदिबहिनी कृर्षि सेवा केन्द्र रामपुरको परामर्श तथा सहयोगमा ‘‘गाँउ–गाँउमा सहकारी घर–घरमा भकारी’’ भनेजस्तै गाउँमा सहकारी स्थापना गरेर नमुना काममा लागेका छन् । पाल्पा सदरमुकाम तानसेन देखी करीव ६८ किलोमिटर पूर्व रामपुर–२ र ९ का महिलाहरूले समुहलाई बिस्तृत गर्दै २०६९ सालमा हराभरा महिला कृषि सहकारी संस्था स्थापना गरेका हुन् । यही सहकारीका महिलादिदिबहिनीले रामपुर ९ को गर्चौदिमा बेसार रोपेका छन् ।
साढे सात रोपनी भिरालो जग्गामा सिलुवा, गल्धा, रामपुरको छहरापानीबाट ५ क्वीन्टल स्थानीय रातो जातको बीउ खरिद गरी ५० हजार बराबरको लगानीमा बेसार लगाएको सहकारीकी अध्यक्ष यमकान्ती गौतमले बताउनुभयो । सहकारीमा १ सय जना महिलादिदिबहिनी आबद्द छन् । कृषि सेवा केन्द्र रामपुर अन्र्तगत पर्ने १० वटा गाविस भित्र कुनै पनि ठाउमा सहकारी या अन्य समूहले बेसार खेती गरेको छैन । पुर्वी पाल्पाका उच्च गाबिसमा घरधुरीमा घरलाई पुग्ने बेसार खेती गरिन्छ । यही समुहमा गरियो भने रमाइलो सँगै राम्रो आम्दानी लिन सकिने कृषि सेवा केन्द्र रामपुरका प्रमुख विजय पौडेलले बताउनुभयो ।
जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा भने केही बर्षदेखि सामुहिक बेसार खेती गरिदै आएको छ । पाल्पाको भैरवस्थानमा रहेको भैरवस्थान महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र खस्यौलीमा रहेको दिदिबहिनी महिला सहकारी सस्थाले विगत ४ वर्ष देखी सामूहिक बेसार खेती गर्दै आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । सदरमुकाम देखी पूर्वमा रहेको चण्डीका बौघापोखराथोकले पनि बेसार खेती गर्दै आएको छ । भैरबस्थान सहकारीको उदाहरणिय कामलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाले अढाई लाख रूपैयाँ र एउटा पाउडर बनाउने ग्रिनिङ्ग मेशिन, दिदिबहिनी महिला सहकारी सस्थालाई साढे ३ लाख रूपैयाँ र २ वटा ग्रिनिङ्ग मेशिन र चण्डीका बौघापोखराथोकलाई एउटा ग्रिनिङ्ग मेशिन अनुदान दिइएको पाल्पाको बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत महेन्द्रराज कौडालले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा दर्ता भएका ३ वटा सहकारीले वर्षमा ५ सय मेट्रिकटन बेसार उत्पादन गर्दै आएका छन् कौडालले भन्नुभयो । पाखो, भिरालो, सिंचाई कम भएको जग्गामा बेसार खेती गर्न सकिने हुनाले पनि पाल्पाको मित्याल, सहलकोट, गाडाकोट, सिलुवा, हुगी, खस्यौली लगायतका आसपासका किसानले बेसार खेती गर्दै आएका छन् । जिल्ला भित्रका विभिन्न ठाउँका किसानले प्रतिकिलो ३५ देखी ४० रूपैयाँका दरले बेसारको बिउ खरिद गरी रोपेका छन् । बेसारको स्याहारे लगत्तै धुलो बनाएर र सुकाएर सुठो बनाएर पनि बर्षाैपछि सम्म पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा उत्पादित बेसार प्रतिकिलो ३ सय ५० देखी ५सय सम्ममा जिल्लाका विभिन्न ठाउमा र जिल्ला बाहिर बिक्रि हँुदै आएको किसानहरू बताउँछन् ।
बगरे खेतीबाट लाखांै आम्दानी
कपिलवस्तु, ३१ वैशाख ।
वाणगंंगा नदीले बनाएको बगर कपिलवस्तुका आधा दर्जन गाविसका कृषकहरूका लागि जीवन निर्वाहको माध्यम बनेको छ । नदीको निख्खर र सुख्खा बालुवामय बगर बनेको जग्गामा समेत नमुनाका रूपमा उनीहरूले चिसो फल काँक्रो, तर्बुजा आदि तथा तरकारी उत्पादन गरी जीवन निर्वाहको माध्यम बनाएका हुन् ।
बगरमा उनीहरूद्वारा उत्पादित चिसो फलफूल र तरकारी आम्दानी लिन चाहने अन्य कृषकहरूका लागि प्रेरणाको स्रोतसमेत बनेको छ । बगरबाट जीविकोपार्जन गर्न बाध्य रहेका भूमिहीन उनीहरूले त्यसबाट राम्रो आम्दानीसमेत गर्न सफल भएका छन् । धनकौली गाविसको बिजगौरी घाटमा एक बिघा जग्गामा काँक्रो, तर्बुजा तथा लौका, घिरौंला, करेलालगायतको खेतीबाट एक सिजनमा ३० हजार रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको स्थानीय कृषक मुरली बढईले खेततर्फ इशारा गर्दै भन्नुभयो ।
वैशाखको प्रचण्ड गर्मीको बाबजुत बालुवाको तापलाई पछ्याउँदै यतिखेर माग बढी भएकाले फल र तरकारीको स्याहारमा जुटेका बढईले आफूहरूद्वारा उत्पादित चिजहरुले राम्रो मूल्यसमेत पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गुर्नभयो । बढ्दै गएको गर्मीसँगै स्थानीय बजारमा चिसो फल र तरकारीको माग बढेकाले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन किसानहरू व्यस्त देखिन्छन् । उत्पादित चिज जिल्लाका बजार, रूपन्देही र भारतीय सीमावर्ती बजारमा खपत हुने गरको छ । “अहिले गरेको मेहनतबाट वर्षभरी खान पुग्छ, असिना पानी, बाढीलगायत मौसमले साथ नदिए पेट पाल्नै धौधौ हुन्छ”, धनकौली गाविसका अर्का कृषक सुखराम मल्लाहले भन्नुभयो । बेमौसमी वर्षाले वाणगंगा नदीमा आएको बाढीले गर्दा आफूहरूले नोक्सानीसमेत व्यहोर्नु परेको कृषकरुले दुखेसो पाखे ।
जिल्लामा करिब ढाई सय बिघा क्षेत्रफलमा बगरे खेती हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । ती कृषकहरूलाई बीउबिजन, औषधी, उपकरण, तालिम र परामर्श सवा दिंदै आइएको कृषि कार्यालयका प्रमुख खुर्सेद अहमद खाँले बताउनुभयो । केही वर्षयता बगरे खेतीको उत्पादन बढ्दै गएपछि भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट आउने गरेको चिसो फल तथा तरकारीहरूको आयातमा भारी गिरावट आएको छ । अहिले बगरमा उत्पादित ताजा तरकारी जिल्लाका तीन दर्जन बढी साप्ताहिक हाटबजार र अन्य स्थानमा समेत छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइन्छ । बलौटे जमिनमा नमुना तरकारी खेती गरेर गुजारा चलाउँदै आएका ती कृषकले मिहिनेतको फल मीठोे हुन्छ भने बालुवामा समेत सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
कामै नगरी बजेट निकासा
गुल्मी, ३० वैशाख । स्थानीय स्तरमा काम नगरी बजेट निकासा भएको तथ्य खुलासा भएको छ । स्थानीय निकायद्धारा लक्षित समुदायका लागि विनियोजन गरिनुपर्ने रकम कामै नगरी निकासा भएको हो ।
जिल्लाको नेटा गाविसमा स्थानीय निकायद्धारा लक्षित समुदायका लागि आएको रकम केही व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेकोप्रति एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय निकाय अनुदान खर्च पुनरावलोकन तथा समुदायको संलग्नता सर्वेक्षण कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । गाविसमा अदुवा, बेसार खेती, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका शीर्षकमा निकासा भएको बजेट केही अन्य क्षेत्रमा खर्च भएको छ भने केही ब्याजमा लगाइएको उपभोक्ता समितिले स्वीकार गरेका छन् । गाविसमा अदुवा, बेसार खेती गर्ने भनेर निकासा भएको १ लाख रूपैयाँ रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको जिम्मा रहेको र खानेपानीका लागि भनेर आएको १ लाख रूपैयाँ समितिले ब्याजमा लगाएको तथ्य खुलेको छ भने सिँचाइका लागि भनेर आएको बजेट लघु जलविद्युतमा खर्च गरिएको छ । त्यस्तै दलित, महिला, जनजातिका लागि लक्षित गरेर छुट्टिएको बजेटसमेत उक्त समुदायलाई थाहै नदिई हेल्थ हट निर्माणमा खर्च गरिएको सार्वजनिक भएको छ । लक्षित समुदायको लागि खर्च गरिनुपर्ने रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिनु तथा सरकारी पैसा समितिका केही व्यक्तिहरूले मनोमानी रूपमा ब्याजमा लगाउनु गलत नियत भएको स्थानीय रनमाया पुनले बताउनु भयो । जुन कामका लागि भनेर आएको पैसा त्यही काममा सदुपयोग हुनुपर्ने हो उहाँले दैनिक पत्रसँग भन्नुभयो ।
लक्षित समुदायका लागि २०६८÷०६९ मा आएको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेकोमा स्थानीय शिवशंकर महिला समूहकी सदस्यसमेत रहनु भएकी रनमायाले दुखेसो समेत व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै गाविसमा आएको विभिन्न योजनाहरूको रकम चरम दुरूपयोग भएको नेटा गाविस ५ का ढालबहादुर बोहोराले बताउनु भयो । यहाँका स्थानीय केही ब्यक्तिहरू मिलेर विचारे खानेपानी योजनालगायत अन्य केही लक्षित समुदायका लागि विनियोजन भएको रकमको दुरूपयोग भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “ गाविस सचिवले कामै नगरी बजेट निकासा दिएकाले यस्तो दुरूपयोग भएको हो, काम भए नभएको हेरेर मात्र उपभोक्ता समितिहरूलाई बजेट निकासा गरिदिएको भए यस्तो हुने थिएन ।” गाविसका विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन नभएकाले लापरवाही भएको छ, त्यसका लागि समय समयमा अनुगन गर्न जरुरी समेत रहेको उहाँले बताउनु भयो । कतिपय योजनाहरूको रकम पनि कामको मूल्यांकन नगरी निकासा दिने गरेको र आफूहरूसँग परामर्श नगरेको भन्दै स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले गाविस सचिवको आलोचना गरेका छन् ।
यता गाविस सचिव मेघप्रसाद पोखरेलले योजनाहरूको बजेट दुरूपयोग नभएको बताउनु भएको छ । गाविसको वडा नम्बर ९ को खानेपानी योजनाको रकम उपभोक्ता समितिले ब्याजमा लगाएको सत्य हो, तर ब्याजमा लगाएको पैसा दुरूपयोग नभएर सुरक्षित भएको बताउनु भयो । गाविस सचिव पोखरेलले भन्नुभयो– “१ लाख रूपैयाँले योजना सम्पन्न नहुने भएकाले समितिले ब्याजमा लगाएको हो, उक्त रकम समितिले जतिबेला पनि उपलब्ध गराउन सक्छ । अन्य काम हुन्छ होला भनेर पैसा दिएँ तर उहाँहरूले ब्याजमा लगाउने काम गर्नुभएछ त्यस्तो गर्नुहँुदैनथ्यो । तत्काल उक्त पैसा जुन कामको लागि भनेर आएको त्यसैमा प्रयोग गर्न लगाउँछु”, पोखरेलले बताउनु भयो । त्यस्तै दलित , जनजाति, महिलाहरूलाई लक्षित गरी आएको रकम हेल्थ हट सेन्टर निर्माणमा लगाएको बताउनुभयो । “यसभन्दा अगाडि आएको बजेटको पनि त्यति सदुपयोग नभएको पाइएकाले यसपटक उक्त समुदायलाई आएको बजेट हेल्थ हट सेन्टर निर्माणमा प्रयोग गरिएको हो”, उहाँले दैनिक पत्रसँग भन्नुभयो ।
गाविसमा देखिएका यस्ता समस्याहरूको सानो छलफलबाट समाधान हुने अवस्था नरहेकाले जिल्लास्तरमा समीक्षा गरेर गाविसमा सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरिने नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय शासन तथा उत्तरदायी संयन्त्रको सहयोगमा संचालन गरिएको स्थानीय निकायहरूको अनुदान खर्च रकम पुनरावलोकन तथा समुदायको सहभागिता सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीले जनाएको छ ।
एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडा नागरिक मञ्च, लक्षित समुदायका प्रतिनिधि तथा स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रम संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक सीता भुसालको प्रमुख आतिथ्यता र अनुसन्धान सहायक शंकर नेपालीको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको थियो भने अध्यक्षता गाविस सचिव मेघप्रसाद पोखरेलको रहेको थियो । लक्षित समुदायका प्रतिनिधिले गाविस संचालन अनुदान निर्देशिकाअनुसार बजेट विनियोजन गरे नगरेको नेटा गाविसलगायत अमर अर्वाथोक दरबार देवीस्थान, पराल्मी, तुराङ गाविसहरूमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीका अध्यक्ष गणेश श्रीपालीले जानकारी दिनुभएको छ ।
तरकारीखेतीबाट राम्रो आम्दानी
तानसेन, ३० वैशाख । चार वर्ष अघिसम्म दैनिकजसो तरकारी बजारबाट किनेर ल्याउने किसानले अहिले बारीमा नै तरकारीखेती सुरु गरेपछि राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् । तरकारीखेतीमा राम्रो आम्दानी हुने मेसो पाएपछि यहाँका किसान मकैबाली छाडेर अहिले तरकारी उत्पादन गर्न थालेका छन् ।
पाल्पा छहरा गाविस–७, दाँगिलका किसान अहिले व्यावसायिकरूपमा तरकारीखेती गरेपछि लाखौँ रकम आम्दानी गर्न सफल बनेका छन् । बजारबाट तरकारी किनेर खाने यहाँका किसान अहिले जिल्लाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तानसेन, हार्थोक, छहरा, अम्लाबासलगायतका स्थानमा तरकारी बेच्न थालेका छन् । चार वर्षअघि विदेशबाट घर फर्केका छहरा–७, दाँगिलका गोविन्द खत्रीको बारीमा हरियो बोडी, सिमी, तीते करेला, बन्दा, टमाटर, काँक्रो, भान्टालगायतका तरकारी उत्पादन गरेका छन् ।
खत्रीे तरकारीखेतीबाट राम्रो आम्दानी भएपछि विदेश जाने सुरसारमा अहिले देखिएका छैनन् । घर परिवारसँगै बसेर तरकारीखेतीबाट लाखौँ रकम आम्दानी गर्न सफल बनेका छन् । तरकारीखेतीबाट मासिक रु ३५÷४० आम्दानी हुने खत्रीले बताए । कम लगानी र कम मिहिनेतमा तरकारीखेती गर्न सकिने भएकाले यहाँका १२ भन्दा बढी युवा तरकारीखेतीप्रति आकर्षित बनेका छन् ।
खत्रीले भने, “विदेशमा १८ घन्टा काम गर्दासमेत सोचेजस्तो पैसा पाइएन, तरकारीखेतीबाट परिवार खुसी बनाएको छु, विदेशमा कमाएको रकमले परिवारमा खुसी छाएको थिएन” उनले विदेशको दुःख सुनाए ।
विषादीरहित तरकारी बिक्री केन्द्र सञ्चालन
बागलुङ, ३० वैशाख – व्यावसायिक कृषिखेतीमा लागेका यहाँका दुई युवाले विषादीरहित तरकारी बिक्री केन्द्र खोलेका छन् ।
विदेशको राम्रो कमाइ छोडेर स्वदेशमै उद्यममा लागेका ती युवाले बागलुङ बजारमा केन्द्र खोली तरकारीको बिक्री सुरु गरेका हुन् । आठ महिनाअघि रु २० लाख लगानीमा पर्वतको पाङमा कालिगण्डकी अर्गानिक कृषि तथा पशुपालन फर्म स्थापना गरेका बागलुङ बोहोरागाउँका सिकिन्दर शाही र पर्वतका रवीन्द्र सुवेदीले विषादीरहित तरकारी बिक्री केन्द्र खोलेका हुन् । केन्द्रको उद्घाटन आज बागलुङका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजालले गर्नुभयो । जिल्लामै पहिलोचोटी सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त बिक्री केन्द्रमा कृत्रिम विषादी प्रयोग नगरी उत्पादन गरिएका तरकारी तथा फलफूलहरू बिक्रीका लागि राखिएको सञ्चालक शाहीले बताउनुभयो ।
“बढ्दो रूपमा विषादीयुक्त तरकारीजन्य उत्पादन भइरहको बेला हामीले जैविक मल र घरेलु विषादीमात्र प्रयोग गरिएका तरकारी उपभोक्तामाझ पु¥याउन बिक्री केन्द्र खालेका हौँ”, शाहीले भन्नुभयो । उत्पादक कृषक र उपभोक्ताको हितका लागि आफूहरूले काम गर्ने शाहीले जानकारी दिनुभयो । सुरुका दिनमा आफ्नै फार्ममा उत्पादित कृषि उपजहरू बिक्रीका लागि राखिए पनि विस्तारै सबै कृषकको उत्पादनलाई बिक्री केन्द्रमा राखिने शाहीको भनाइ थियो । बिचौलियाबाट कृषक तथा उपभोक्ताहरू ठगिएको बेला त्यसलाई अन्त गर्न केन्द्रले प्रभावकारी काम थाल्ने शाहीले बताउनुभयो । शाही र सुवेदीले करिब रु ७२ लाख लगानीमा पर्वतको पाङ सहर्षधारामा अर्गानिक फार्म कृषि तथा पशुपालन फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ । हाल कृषि फार्मका लागि रु २० लाख जति लगानी गरेको बताउँदै सञ्चालक रवीन्द्र सुवेदीले आगामी दुइवर्षभित्र व्यावसायिक गाईपालन, बाख्रपालन र माछापालन सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास र कार्ययोजनाको निर्माणको काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सहज र सुलभरूपमा उपभोक्तालाई तरकारी उपलब्ध गराउन केन्द्रले कार्ड प्रणाली लागु गरेको छ । “उपभोक्तालाई सुलभ दरमा तरकारी बेच्ने उद्देश्यले कार्डको व्यवस्था गरेका हौँ” सुवेदीले भन्नुभयो, “यसबाट उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिने हाम्रो विश्वास छ ।”
जहिले पनि बीचका व्यापारीहरूबाट उत्पादक कृषक र उपभोक्ता ठगिने गरेको पाइएकाले कार्डको व्यवस्था गरिएको उहाँहरूको भनाइ छ । केन्द्रले व्यक्तिगत रूपमा उपभोक्ता कार्ड, व्यापारीहरूका लागि व्यापारिक कार्ड र संस्थागत उपभोक्ता कार्डको व्यवस्था गरेको छ । “कार्ड लिएर आउने उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा तरकारी दिन्छौँ कार्ड नभएका उपभोक्ताले बजारकै मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ”, सुवेदीले भन्नुभयो । धौलागिरि अञ्चलका कृषकलाई एकताबद्ध गरी प्राङ्गारिक तरकारीखेतीतर्फ उत्प्रेरित गर्ने लक्ष्य उहाँहरूको छ । पुख्र्यौली पेसा कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आफूहरू सधँै लागिपर्ने सञ्चालक सुवेदीले बताउनुभयो । यसपछि केन्द्रलाई छिमेकी जिल्लाको कुष्मा र बेनीबजारमा पनि स्थापना गरिने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । ‘उद्योग जोगाउन खोज्दा बैंक नै रुग्ण बन्ने खतरा’
काठमाडौं,२९ बैशाख– सरकारले रुग्ण उद्योगहरूलाई ऋण मिनाहको लागि गर्ने अनुरोधले बैंकहरू नै रुग्ण हुने अवस्था आउने गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २९ औं बैठकमा सिंहदबारमा आइतबार उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
‘उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगलाई ऋण मिनाह गरिदिन भन्दै राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाउने गरेको छ’, गभर्नर खतिवडाले भन्नुभयो, ‘सरकारले यो प्रवृत्तिलाई नसच्चाउने हो भने आज उद्योग मात्र रुग्ण बनेकामा भोलि बैंक पनि रुग्ण हुनेछन् ।’ बैंकहरूलाई व्यवसायिक ढंगले स्वतन्त्रपूर्वक सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका बन्द भएका सबै शाखा पुनःस्थापना नहुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राजनीतिक तहबाट शाखा पुनःस्थापनाको माग भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले व्यवसायिक सम्भाव्यता अध्ययन नगरी खोलिएका शाखा अहिले पुनःस्थापना हुँदैनन्, सम्भाव्य शाखा मात्र पुनःस्थापना हुनेछ ।’
सबै स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्नु नपर्ने र साना बैंकहरू बिस्तार गर्ने नीति रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
‘सामान्य करदाताले दुःख पाउनु हुँदैन’
पछिल्लो समय आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाले आफ्नो गतिविधिलाई तीब्रता दिएको छ । करदाता शिक्षा, नियमित अनुगमन, करका दायरामा नआएकाहरूलाई ल्याउने प्रयास लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । कार्यालयको कार्यक्षेत्र रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका तथा ५३ गाविस र नवलपरासीको नगरपालिकासहित २९ गाविस रहेको छ ।
केही समयअघि मात्रै कार्यालयको प्रमुख कर अधिकृतमा जनकराज शर्मा सरुवा भएर आउनुभएको छ । निजामति सेवा प्रवेशसंगै १० बर्षदेखि अर्थमन्त्रालय अन्तरगत राजश्व विभागमा काम गर्दै आउनुभएका शर्मासंग राजश्व सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर मनोरञ्जन शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षेप ः
यस क्षेत्रमा करका दायरामा नआएकाहरूलाई दायराभित्र ल्याउन के–के गर्नुभएको छ ?
करको दायरामा नआएकाहरूलाई दायराभित्र ल्याउन अहिले हामीहरू प्रयासरत छौं । कर कार्यालय भन्ने बित्तिकै सबै डराउने पहिलादेखिको भ्रम अहिले पनि हट्न सकेको छैन् । त्यसैले हामीहरूले अहिले करदाता शिक्षालाई तीब्रता दिएका छांै । पछिल्लो समय रूपन्देही र नवलपरासीमा गरी २१ पटक करदाता शिक्षा सम्पन्न गरी सक्यौ । यसका साथै कर कार्यालयमा दर्ता भए नभएको विषयमा बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छौं । करको दायरामा जानुपर्छ भन्ने अहिले धेरैले बुझ्न थालेका छन् ।
करको दायरामा अहिलेसम्म कति आएका छन् ?
अहिले चैत्र मसान्तसम्ममा यो कार्यालय अन्तरगत रहेका क्षेत्रहरूका गरी कुल करदाताको संख्या करिब १५ हजार रहेको छ । ती मध्ये २ हजार ७ सय १८ मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका छन् । यो बर्षमात्रै श्रावणदेखि चैत्रसम्म १ हजार ५ सय ४१ करदाता थपिएका छन्,त्यसमध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ३ सय १६ आएका छन् । असार मसान्तसम्म करको दायरामा आउनेहरूको संख्या अझै बृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छांै,करदाता शिक्षा अनुमगन नियमितलगायतका कारणले अहिले सानासाना व्यवसायीहरू पनि करको दायरामा जानुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोंच बढ्दै गएको छ ।
कस्ता–कस्ता व्यवसायिक फर्महरू मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)मा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ ?
पछिल्लो समय विभागले विभिन्न व्यवसायिक फर्महरूलाई भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुन आग्रह गर्दै आएको छ । नगरपालिकाभित्र संचालनमा रहेका हार्डवेयर पसल, फर्निचर÷फिक्सचर, पार्टी प्यालेश,मार्वल व्यवसाय,क्याटरिंग,मेशिन प्रयोग हुने ड्राई क्लिनर्स, जिम सेन्टर, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, कलरल्याब अनिवार्यरूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्दछ । त्यस्तैगरी बारसहितको मदिरा बिक्री गर्ने रेष्टुरेन्ट पनि भ्याटमा आउनु पर्दछ ।
इँटा व्यवसायीहरूलाई त अझै पनि भ्याटको दायरामा ल्याउन सक्नुभएन नी?
यस विषयमा पनि कुराकानी भैरहेको छ । अब छिटै नै इँटा व्यवसायीहरू पनि भ्याटमा दर्ता हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
कर छल्ने प्रवृत्ति कत्तिको पाउनुभएको छ ।
आम्दानी कम देखाएर कम कर तिर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तामाथि विशेष निगरानी बढाइएको छ र अनुसन्धान हुन्छ । कर छल्नु भनेको राज्यलाई छल्नु हो । त्यस्तो काम कसैले गर्नु हुँदैन । कर सम्बन्धी केही समस्या प¥यो भने सिधै कार्यालयमा आउन सक्नुहुन्छ, ठूला व्यवसायीले कर परामर्शदाता राखेका हुन्छन्, साना व्यवसायीहरू र सामान्यकरदाताले दुःख पाउनु हँुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । साना करदाताहरूको सजिलोका लागि नै निवेदन दिएकै दिन करदर्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेका छांै । यसले गर्दा करदाता एउटै प्रमाणपत्र लिनका लागि बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त भएको छ । उजाड जग्गामा तरकारी फलाउँदै किसान
पाल्पा (रामपुर), २४ बैशाख ।
पहिले गाउँका बारी उजाड थियो । गरेको अन्नले राम्रो उत्पादन दिदैनथ्यो । गाउँमा खानेपानी योजना सञ्चालन भएपछि तरकारी खेतीमा लागेका किसान अहिले राम्रो कमाई गर्छन्’’ यो भनाई स्याङ्गजा मल्याङ्गकोट च्यारेका किसान जयराम पंगेनीको हो ।
पंगेनी झै च्यारेका बिभिन्न टोलका किसान अहिले अन्नबाली छाडेर तरकारी खेतीमा लागेका छन् । गहुँ, मकै छर्ने बारीमा जयराम पंगेनी जस्तै यहाँका किसानले फलाएका बन्दा, काउली, टमाटार, काक्रा, घिरौला, लौका, खुर्सानी लगायतका तरकारी सुन्तला जस्ता फलफुल बेचेर घर व्यवहारको खर्च, छोराछोरीको पढाइ, रोजगारीको वातावरण बनाएर पनि केहिले रकम बैैक व्यालेन्स समेत गर्ने गरेका छन् ।
२०५४ सालमा तरकारी समुह गठन गरी करेसाबारीमा तरकारी खेती गरेका किसानले विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग र प्राबिधिक ज्ञानसिप पाएपछि व्यबसायिक तरकारी खेतिलाई फस्टाउदै लगेको स्थानिय शिक्षक सुर्य प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
चक्रकला फलफुल तथा तरकारी समुहमा मल्याङ्कोटका ५१ जना कृर्षक आबद्ध छन् । सबै किसानले तरकारी खेति गरेका छन् । ति मध्ये १५ जना बढि किसानले व्यवसायिक फलफुल तथा तरकारी खेति गरेर राम्रो आम्दानी लिदै आएको अगुवा कृषक चोलाकान्त गिरीले बताउनुभयो ।
यहाँका किसानले २ देखि १० रोपनी क्षेत्रफलसम्ममा तरकारी खेती गरेका छन् । ‘‘मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफुल बेचेर सरदर बर्षेनी ५० हजार रूपैया बढी आम्दानी गछौ’’ च्यारेका कृषक तेज प्रसाद अर्यालले भन्नुभयो ।
कृषि सेवा केन्द्र मल्याङकोट, जिल्ला कृषि विकास कार्यलय स्याङ्गजा, गोरखा वयलफर सिस्टम खानेपानी व्यवस्थाको सहयोग र प्राविधिक ज्ञान पाएपछि कृषिमा लाग्न हौसला मिलेको समुहका अगुवा कृर्षक निलकण्ठ काफ्लेको भनाइ छ । निरन्तर कृषि पेशामा लागिरहेर आम्दानीको बाटो बनाउन हौसला बिभिन्न अनुदान र सहयोग मार्फत सरकारले थप्ने हो भने पैसा कमाउन विदेशिनु जानै नपर्ने उदारण नेपाली बनेर देशको आर्थिक बिकासमा फड्को मार्ने काफ्लेले बताउनुभयो ।
उत्पादन तरकारी जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र वालिङ, दार्सिङबजार, रत्नपुर, चिन्नेबास, मनकामना, यलादी, त्रियासी बजारमा बिक्री हुने गरेको छ ।